Tareen ku safro Talyaaniga blog
Category: Tareen Safar Talyaani
Home > Tareen Safar Talyaani
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Safrida meel kasta oo had iyo jeer waa mid cajiib ah oo aynu u qaadanaa in la ogaado magaalo qurux badan, taariikhda dalka ama dhaqamo aad u kala duwan ka annagaa. Si kastaba ha ahaatee, Qasab ma aha in aad meel fog tago guriga si loo ogaado meelaha quruxda badan. Waxaa jira dhowr tours tareenka Yurub…
Ultimate Guide The meelo Yoga Best Italy ee
by Maryan Cihodariu
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan Italy sida caga fasax ah waa in ay wax aad si fudud u xoqin off liiska baaldi ma. Inaad Italy mar kale iyo mar kale oo weli ku noqon karto kamana dhergi doonaan dadka dalkan picturesque iyo qiimaha ay delicious, midna…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo New-xawaaraha sare, tareenada xuduudaha sii wadi in la furo khadadka dunida oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, waxay had iyo jeer ku garaacday safarka hawada ku saabsan raaxada, faa'iidada, iyo xawaaraha safarka. Markan, waxaa jira shabakado tareen iyo aad u badan oo adduunka ah! Qof kasta oo uu galay tareenada xuduudaha…